ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ရပါ - လူသားစားဖုတ် (သို့မဟုတ်) ဖုတ်ဘုရင်တို့ရဲ့ မာယာ ( ဖြစ်ရပ်မှန်) - Myannewsmedia
ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ရပါ – လူသားစားဖုတ် (သို့မဟုတ်) ဖုတ်ဘုရင်တို့ရဲ့ မာယာ ( ဖြစ်ရပ်မှန်)
By SPACEPosted on January 1, 2020 January 9, 2020
ကျွန်တော်အခုပြောပြမှာကတော့ ဖုတ်ဝင်တဲ့ အကြောင်းပါ။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေအန်တီတစ်ယောက်၏ ဖခင်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းဝင်ရောက်သွားတဲ့ ဖုတ်အကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအန်တီက မိသားစု သုံးယောက်ရှိပါတယ် ….သူ့ ယောက်ျားရယ်၊ သူရယ် ငါးတန်းအရွယ်သား တစ်ယောက်နဲ့အတူနေထိုင် ကြပါတယ်…
အန်တီ့အမျိုးသားကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်နေပါတယ်… အဲဒီလိုနဲ့ နယ်မှာ နေတဲ့့အန်တီ့ဖခင်ကြီး သူ့သားမက်ဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားသွားနေတုန်း သမီးဖြစ်သူမိသားစုကိုလည်း စောင့်ရှောက် ရင်း မိမိမှာခံစားနေရတဲ့ သွေးတိုး၊ဆီးချိုရောဂါကို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဆရာဝန်(အထူးကု)များနဲ့ ပြသဖို့ အတွက် တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်အစီစဉ်နဲ့ သမီးရှိရာရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးဆီကို တက်လာခဲ့ ပါတယ်။
ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြေးလေးနဲ့အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကိုလည်းဖူး၊ မြေးလေး သွားချင်တဲ့ အားကစားကွင်းတွေလည်းလိုက်ပို့ နဲ့ အရမ်းကိုပျော်နေတာပေါ့ ဗျာ။ ဆေးခန်းကိုလည်း သွားပြီး ဆေးစစ်ကြတယ်။ဆေးစစ်ချက်အဖြေကတော့ ဆီးချိုကသိပ်မတက် ပေမဲ့ သွေးကတော့ တော်တော်တက်နေ တဲ့အတွက် ဆရာဝန်ကသွေးကျဆေးတွေပေးလိုက်ပြီး သွေးတက်စေနိုင်မယ့် အစားတွေ ရှောင်ဖို့သတိပေး လိုက် တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အန်တီ့အဖေဟာ သမီးနဲ့မြေးနှစ်ယောက်ထဲကို စိတ်မချတာနဲ့ သားမက်ပြန်လာတဲ့ အချိန် အထိ ရန်ကုန်မှာခဏနေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်….
တစ်ရက်တော့ ညနေ ညီအကိုမသိတသိအချိန်မှာ အဲဒီဘကြီးက အိမ်ရှေ့ မှာထိုင်ခုံနဲ့ ထိုင်နေရင်းမြေးလေးက သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ကစားနေတာကိုကြည့်နေရင်းရုတ်တရက်လဲကျသွား တယ်…. အဲဒါကိုမြင်တဲ့အိမ်ထဲက သမီးနဲ့ ကစားနေတဲ့ မြေးလေးတို့့က အပြေးအလွှားရောက်လာပြီးတော့ ဘာဖြစ်တာလဲလို့ မေးလိုက်တယ်…
အဲဒီအခါဘကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ကိစ္စမရှိဘူးလို့ ပြောပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားရာက… အဲအချိန်စပြီး အဲဒီဘကြီး ဟာအရမ်းပြောင်းလဲသွားတော့တာပဲ….အိပ်ခန်းထဲကအပြင်ကို သိပ်မထွက်တော့ ဘူး….အိမ်သားတွေနဲ့လည်း စကားသိပ်မပြောတော့ ဘူး… အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးဆွမ်းလောင်းနေတဲ့ ဘကြီး၊ မနက်တိုင်းတရားခွေဖွင့် နေတဲ့ သူဟာ ဆွမ်းလည်းမလောင်းတော့သလို တရားခွေလည်း မဖွင့် တော့ ဘူး ။
သမီးဖြစ်သူကဘာလို့ ဆွမ်းမလောင်းတာလဲလို့ မေးရင် နေမကောင်းလို့ ခေါင်းမူးလို့ အကြောင်းပြတယ်…. သမီးက မနက်တရားခွေဖွင့် ပြန်ရင်လည်း ဒေါသထွက်ပြီး နားညီးတယ် အိပ်လို့ မရဘူးဆိုပြီး သောင်းကြမ်းပြန် ပါရော… သူ့ သမီးကလည်း တစ်ခါမှသူ့အဖေအဲဒီလိုမဖြစ်ဖူးဘူးဆိုပြီး အရမ်းအံ့ သြနေတယ်။
ဆေးခန်းပြဖို့ပြောပြန်ရင်လည်း ငါနေကောင်းသွားပြီ၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပဲ ပြန်ပြောတယ်…ထမင်းစားချိန်ရောက်ရင်လည်း အရင်တုန်းကဆိုရင် သမီးနဲ့ မြေးနဲ့ အတူစားနေကျ ဘကြီးက အခုအခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း စားတယ်။ နေ့လည်စာ သိပ်မစားဘူး….
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ချက်ရင် ခံတွင်းပျက်နေတယ်ဆိုပြီး လုံးဝမစားဘူး…. အသားငါး ဆိုရင်တော့ အများကြီးစားတယ်တဲ့…..့ အရင်က အသားငါးသိပ်မစားတဲ့ သူဆိုတော့ သူ့ သမီးကလည်း အရမ်း ထူးဆန်းနေတယ်။
အဖေဘာစားချင်လဲလို့ သမီးကဈေးသွားခါနီးမေးရင် အမဲသားကျွေးပါလို ပြောတယ်…အဖေအမဲသား မစားဘူး မဟုတ်လားလို့ မေးရင် အဲဒါအရင်က…အခုကျန်မာရေးမကောင်းလို့ အားရှိအောင်စားပီလို့ ပြောတယ်တဲ့…
ဘာလဲ နင်ကငါ့ ကိုမသထာလို့ လားလို့ မျက်ထောက်နီကြီးနဲ့ ပြန်မေးသေးသတဲ့…. သူ့ သမီးကလည်း အဖေစိတ်ချမ်းသာအောင် ချက်ကျွေးပါတယ်။ အမဲသားတို့၊ ကြက်သားတို့ ချက်ကျွေးတဲ့နေ့ဆိုရင် ပြုံးရွှင်နေ တာပဲ…. အသီးအရွက်ချက်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ ရန်လုပ်တယ်တဲ့ ဗျ…. အဲဒီလိုနဲ့ တစ်လခွဲလောက်ကြာ လာတယ် လေ။
ထူးခြားတာကအနှိပ်သည်ကို သုံးရက်တခါနှစ်ရက်တခါလောက်ခေါ်ခိုင်းတတ်တာပဲ…. သူ့ မြေးလေကိုရော၊ တခြား သူ့ကို လူမမာလာမေးတဲ့ လူတွေကိုလည်း နှိပ်ခိုင်းတယ်…. နောက်ပြီးတော့ နောက်နေ့ မနက် ဆွမ်းလောင်းဖို့့အသားဟင်းတွေချက်ထားရင် ပျောက်ပျောက်သွားတယ်….
မီးဖိုထဲမှာ ထားတဲ့ ငါးရံ့ ခြောက် တွေ နဲ့ ဆတ်သားခြောက်တွေလည်း ပျောက်ကုန်တယ်တဲ့…. ပထမတော့ ကြောင်စားတယ်နေလိမ့်မယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်တဲ့။ နောက်တော့ အန်တီလည်း သိပ်သင်္ကာမကင်းဖြစ်လာတယ်… ဖုတ်ဝင်နေတဲ့ ဘကြီးရဲ့ အနေအထားက တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာတယ်။
ဘယ်လောက်ထိဆိုးလာလဲဆိုရင် အန်တီတို့ အိမ်ကပေ၂၀၊ ပေ၆၀ အိမ်ဆိုတော့ဘေးအိမ်နဲ့ က အရမ်းနီး တယ်လေ…ခြံစည်းရိုးလည်းခတ်မထားတော့ ပုဏ္ဏရိတ်ပန်းပင်လေးတွေနဲ့ ခြံစည်းရိုးပုံလုပ် ထားတာဆိုတော့ အလွယ်တကူ တစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်ကူးလိုရတယ်။ ခေါင်းရင်းဘက်အိမ်မှာက ကြက်လေးငါးကောင် မွေးထား တယ်။ အဲဒီအိမ်ရဲ့ ကြက်အိပ်တန်းက အန်တီတို့ အိမ်အနောက်ဖေးဘက်ကနေ ကပ်လျက်ရှိနေတယ်။
ဘကြီး အမူအယာတွေပျက်လာပြီးလို့ တလကျော်ကြာတဲ့အခါ ကြက်တွေကပျောက်ပျောက်သွားတယ်… အဲဒီအိမ်က လူတွေကတော့ ကြောင်သုတ်သွားတယ်လို့ ထင်တာပေါ့။ အန်တီတို့ အိမ်မှာကလည်း မီးကောက်ဆိုတဲ့ ကြောင်ထီးကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်လေ။ နောက်ပီး အန်တီ့သားကလည်း အိမ်နောက်ဘက်မှာ ငါးတွေမွေးထား သေးတယ်လေ…
တစ်ရက်မှာ အန်တီက သူအဖေအိပ်ခန်းကိုဝင်ရှင်းပေးတော့ ကြက်မွှေးတွေနဲ့ သွေးအချို့ ကိုတွေ့ ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ အဖေကိုပြပီးမေးတော့ အဖိုးကြီးကကြောင်ချီလာတာဖြစ်မယ်လို့ ပြောတယ်တဲ့ … အန်တီလည်း သိပ်မသင်္ကာတာနဲ့ အရိပ်အခြေကြည့် နေလိုက်တယ်။ တနေ့ ညနေဘက် အဖိုးကြီးက အိမ်နောက်ဖေးဘက်ကို သွားရင်း ငါးကန်ထဲကို လက်နှိုက်နေပြီး ရွှေငါးတစ်တောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ ပါးစပ်ထဲအထည့်မှာ သူ့ မြေးကမြင် တော့ အန်တီကိုလှမ်းခေါ်ပြတယ်။ အန်တီကလည်း အဖေဘာလုပ်တာလဲလို့ မေးရော….
အဖိုးကြီးက ငါးလေးတွေ လှလို့ ကြည့် နေတာလို့ ပြန်ဖြေသတဲ့ ။ ခုနက ငါးတစ်ကောင်ပါးစပ် ထဲကို ထည့် လိုက်တယ် မဟုတ်လားလို့ မေးတော့ မသိသလိုနဲ့ နေပြီး ငါခေါင်းမူးလာလို့ အခန်းထဲပြန်ပို့ ဆိုပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အန်တီလည်းသူ့ အဖေကို အိပ်ခန်းထဲတွဲခေါ်ပြီးပြန်ပို့ ပေးလိုက်တယ်။ အန်တီလည်း ဘာမှမလုပ်တတ် တာနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့် တယ်။ မိတ်ဆွေတွေကတော့ တစ်ယောက်တမျိုးပြောကြတာပေ့ါ။
ဖုတ်ဝင်တာထင်တယ်လို့ အများဆုံးပြောကြတယ်။ အန်တီကတော့ သူ့ အဖေကိုအဲဒီလိုမထင်ရက်ဘူးလေ၊ အဲဒါနဲ့ မလေးမှာရှိတဲ့ ယောင်္ကျားဆီဖုန်းခေါ်ပြီးပြောတော့သူ့ ယောင်္ကျားက အဲဒါတွေအယုံအကြည်မရှိတော့အဖိုးကြီးတစ်ရက် အိမ်ရှေ့ မှာလဲကျတုန်းက ဦးခေါင်းကိုထိခိုက်သွားပီး ဦးဏှောက်ထိသွားတယ် ထင်တယ်။
ဆရာဝန်ပြကြည့် လို့ ပြောတယ်တဲ့ ဗျ။ ဆေးခန်းသွားဖို့ ခေါ်တဲ့အခါကျပြန်တော့လည်း အဖိုးကြီးက မလိုက်ချင် ဘူးလို့ ငြင်းတယ်လေ။ ရပ်ကွက်ထဲက ဆရာဝန်ကို အိမ်ပင့် ပီးပြရော…ဆရာဝန်သွေးချိန်ကြည့် တော့ ပြဒါးက တက်မလာဘူးတဲ့ ။ ဘယ်တက်မလဲ။ အဖိုးကြီးက အသက်မှ မရှိတော့ တာ။ သွေးစမ်းတော့ လည်း ဘယ်လိုမှ သွေးခုန်နှုန်းစမ်းလို့ မရဘူး ။ ဆရာဝန်လည်းနည်းနည်းလန့့်သွားတယ်။
ဆရာဝန်ကအဖိုးကြီးကို ဦးလေး နေကောင်းရဲ့ လားတော့ မေးတော့ အဖိုးကြီးက အသံခပ်မာမာနဲ့ မကောင်းဘူး လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ဘယ်နေရာက ဘာဖြစ်လဲလို့ မေးတော့ ငါဆာတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘာစားချင်လဲလို့မေးတော့ ရင်ခေါင်းသံကြီး နဲ့ အသားလို့ ပြောပီး ဆရာဝန်နဲ့ အန်တီတို့ ရဲ့ တခြားတစ်ဖက်ကိုလှည့် သွားရော။
ဆရာဝန်လည်း အခန်းအပြင်လည်း ရောက်ရော အန်တီ့ကို အဖိုးကြီးကို သူကုလို့ မရဘူး။ ပျောက်မှာ မဟုတ် ဘူးလို့… အရိပ်အမြွက်ပဲ ပြောပြီးပြန်သွားတယ်။ အန်တီလည်း နယ်မှာရှိတဲ့ သူ့ မောင်နှမတွေဆီကို အကြောင်း ကြားလိုက်တယ်။ လူပျိုဖြစ်တဲ့့မောင်အငယ်ဆုံးက ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် အဖိုးကြီးကသူ့ သားကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ တွေ့ တွေ့ ချင်း မင်းဘယ်သူလဲ လို့ မေးတယ်။ အန်တီ လည်း အဖေ့ သားအငယ်(မောင်——-)လေလို့ ပြောတော့ အဖိုးကြီးက အသက်ကြီးတော့မေ့ တတ်တယ်လို့ ပြန်ဖြေ သတဲ့ ။ နယ်က အမျိုးတွေစီစဉ်ပေး လိုက်တဲ့ ခုံဖိနပ်တို့ သြဇာရွက်တို့သိမ်ဝင်အပ်တို့ ကို အဖိုးကြီး အိပ်ယာအောက်ကိုထည့်ဖို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်တိုးတိုးတိုင်ပင်သတဲ့ ။
အဲဒါကိုအဖိုးကြီးက အခန်းထဲက ဘယ်လိုမှ မကြားနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခန်းထဲကအသံသြကြီးနဲ့ အဖိုးကြီးက မင်းတို့ ဖိနပ်စုတ်၊ အပ်စုတ်ကို ငါကြောက်တယ်လို့ ထင်နေလား…။ အားလုံးအသေဆိုးနဲ့ သေသွားမယ်။ ငါ့ ကိုဘာမှတ်နေလဲလို့အော်တယ် တဲ့ ဗျ။ အန်တီလည်း အရမ်းလန့် သွားပီး အဲဒီအိမ်မှာ မအိပ်ရဲတာနဲ့ မျက်စောင်းထိုးက မိတ်ဆွေအိမ်မှာ မောင်နှမတွေသွားအိပ်ကြရတယ်…
အဲဒီညကစပီး အဖိုးကြီးလဲသောင်းကြမ်းတော့ တာဘဲ….၊တောက်ခေါက်သံတွေ အကျယ်ကြီးကြားရတယ်လို့ဘေးအိမ်ကပြောတယ်။ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ဖနောင့်တွေလည်း ဆောင့် တယ်တဲ့…. ဘေးအိမ်နဲ့ က အရမ်းကပ် နေတော့ အားလုံးကြားနေရတယ်ဗျ…
နောက်တနေ့အန်တီ့မိတ်ဆွေအကူညီနဲ့ဖုတ်ထုတ်တဲ့ဆရာ တစ်ယောက်ကို အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်။ သူတို့ အိမ်ထဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာ မြင်လိုက်ကြရတာက အိမ်တွင်းအုန်း ကိုဆွဲဖြုတ်ထားတယ်။ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ကြောင်ကြီးကိုလည်း မတွေ့ ရဘူးတဲ့ ….
အဲဒီအချိန်မှာ အဖိုးကြီးကသောင်းကြမ်းပါလေရော… ဆရာကိုလည်း အရမ်းကြိမ်းတော့တာပဲ။…. ပြီးတော့ အခန်းထဲကထွက်လာပြီး ဆရာ့ကိုလည်ပင်း ညှစ်မလို့လုပ်သတဲ့ ။ ဆရာလည်း ထွက်ပြေးရောဗျာ။
အန်တီတို့ မောင်နှမလည်း အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းပြေးရရော… ညကအိပ်တဲ့ အိမ်ကိုပြန်ပြေးလာကြပြီး အန်တီလည်း ကြောက်လို့ ငိုပါလေရောတဲ့ ….. အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီအိမ်ကို ဆွမ်းခံကြွနေ တဲ့ ဦးပဇင်းလေး ကမြင်ပြီး ဒါယကာမကြီး ဘာဖြစ်တာလဲလို့ မေးတယ်။
အန်တီလည်း ဦးပဇင်းလေးကို အကြောင်းစုံ လျှောက်ထားလိုက်တယ်….ဦးဇင်းလေးကလည်း ဒါမျိုးတွေဟာ ဘုရားရှင်လက်ထက်ထဲက ရှိကြောင်း၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်တွေနဲ့ ကမ္မဝါ ၊နဲ့ ပရိတ်တော်တွေကို သီလသမာဓိရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ရွတ်ဖတ်ပေးရင် အစိမ်းသရဲ၊ နာနာဘာဝတွေထွက်ပြေးရကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်။
အန်တီလည်း ဦးဇင်းလေးရှင်းပြတာနားထောင်ပြီး ဦးဇင်းလေး၏ကျောင်းတိုက်သို့လိုက်ကာ ဆရာတော်ကို အကြောင်းစုံလျှောက်ထားပြီးမကောင်းဆိုးဝါးရန်မှကာကွယ်ရန်လျှောက်တင် အကူညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဆရာတော်က ဒကာမကြီးရဲ ဖခင်ဟာ လူ့ လောကထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ ဒကာကြီးရဲ့ ဝိညာဉ်မဲ့ နေ တဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာ ကို တစ်စုံတခုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်ရောက်မှီခိုနေတာမို့ဆရာတော်တို့ ကဘုရားရှင်၏ ပရိတ်တရားတော်တွေ ကမ္မဝါစာတွေ ရွတ်ဖတ်ပီး သာသနာစောင့် နတ်နဲ့ နတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုအမိန့် ပြန်စာတမ်းတွေ ရွတ်ဖတ်လျှင် ဝင်ရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ချက်ချင်းဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်။
အဲဒီအခါမှာ ဒကာကြီးရဲ့ဝိညာဉ်မဲ့ခန္ဒာကိုယ် သာကျန်ခဲ့ မှာဖြစ်လို့ ဒကာမကြီးအနေနဲ့ ဒီသောကမီးကိုကြံ့ ကြံ့ ခံနိုင်ပါ့ မလားလို့ မေးပါတယ်။ အန်တီလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားပါဘုရားလို့ ဖြေပါတယ်။
ဆရာတော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ပရိတ်ချည်တွေကို ပေးလိုက်ပြီး အိမ်ပတ်ပတ်လည်ကိုချည်တားစေပါတယ်။ အိမ်အဝင်ပေါက်တခုတည်းသာ ချန်ခဲ့စေပါတယ်။ ဒါကလည်း ဆရာတော်တွေကြွလာရင် အိမ်ထဲဝင်ဖို့ နဲ့ ဖုတ်ထွက်သွားဖို့ ပါ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အန်တီ့မောင်နဲ့အတူ ရပ်ကွက်ထဲက ယောက်ျားလေးသုံးယောက်လောက်က အိမ်ပတ် ပတ်လည်ကိုပရိတ်ကြိုးတားပါတော့ တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာအဖိုးကြီးလည်း အရမ်းသောင်းကြမ်းပါတော့တာပါပဲ။ ပထမတော့ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ပြီးတော့ တောက်တွေခေါက်၊ ဖနောင့်တွေ စောင့် ပြီး သေချင်လို့ လား ဘာညာ တွေ ပြောပီး အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုကောက်ပေါက်တာတွေ လုပ်သတဲ့ ဗျ…..
မရလည်း မရရော ငိုပီး တော့ သူ့ သားကို အဖေ့ ကိုမသတ်ပါနဲ့ အဖေမသေချင်သေးဘူးလို့ လိမ်ပြီးဟန်ဆောင်ပြောသတဲ့ ။ သူ့ သား ကလည်း မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီးလုပ်စရာရှိတာကိုဆက်လုပ်တယ်။ ညနေသုံးနာရီလောက်မှာ ဆရာတော်တွေ ကြွလာကြတယ်။
ဆရာတော်တွေ အိမ်ပေါ်လည်းရောက်ရော အဆင်သင့်ပြင်ထားတဲ့ ပရိတ်ပန်း၊ ရေ၊ သဲ၊ အပ်ချည် စတာတွေကို အန်တီက သူသွားနေတဲ့ အိမ်ကယူပီး သူ့ အိမ်ကိုကူးလာခဲ့ တယ် ။ အဖိုးကြီးကလည်း အိမ်ခန်းထဲမှာ သောင်းကြမ်း နေတာဗြောင်းဆန်နေတာဘဲတဲ့ ။ တောက်တွေလည်းခေါက် ။ သက်ပြင်းတွေချ အသံသြကြီး နဲ့ အော်နေသတဲ့ ။
ဆရာတော်တွေကလည်း အိမ်ရှင်ကို ဒီအိမ်မှာ မကောင်းသော နာနာဘာဝတွေနေထိုင်တာကို ကြိုက်မကြိုက် အရင်မေးပါတယ်။့ ပြီးတော့ အိမ်ရှင်မကြိုက်လို့ နှင်ပေးပါရန် ဆရာတော်များကို လျှောက်တင် ပါကြောင်း ပြောတဲ့ အခါ ဆရာတော်က အိမ်ပိုင်ရှင်မကြိုက်ပါသောကြောင့် သာသနာစောင့် နတ်နဲ့ ဝိရူပက္ခ၊ ဝိရူယက္ခ၊ ဒသရဌ၊ ကုဝေရ….စတဲ့ နတ်မင်းကြီးလေးပါး သိကြားမင်း ၊ မြို့စောင်၊့ လမ်းစောင်၊့ အိမ်စောင့် နတ် တွေကိုမြတ်စွာဘုရား၏ အမိန့် ပြန်စာတွေရွတ်ဖတ်ပီး နာနာဘာဝကိုသင့် တော်ရာသို့ ခေါ်ဆောင် သွားရန် ပြောဆိုပီး ကမ္မဝါ၊ရတနာသုတ်၊့ အာဋာဏာဋိယသုတ်နဲ့ ဘုရားဂုဏ်တော်၊ တရားဂုဏ်တော်၊ သံဃာဂုဏ်တော် တွေ ကိုရွတ်ဖတ်ပေးပါတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ပရိတ်တရားတော်တွေရွတ်ဖတ်စဉ်မှာ အိပ်ခန်းထဲကအဖိုးကြီးက ပူလောင်လှကြောင်း၊ သူ့ ကိုဝိုင်းပီးနှောင့်ယုက်နေကြကြောင်း နားထဲကို သံရည်ပူတွေ လောင်းထည့်နေကြ ကြောင်း အော်ပြောပါတယ်။
ဆရာတော်လည်း ပရိတ်များ ရွတ်ဖတ်ပီး အဖိုးကြီးကိုအပြင်ထွက်ခဲ့ ဖို့ ခေါ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အဖိုးကြီးဟာ အိပ်ခန်းထဲကနေပီး လည်ပင်းကြီးကို၉၀ဒီဂရီလောက်စောင်းပီး လေးဖက်ထောက်ထွက် လာပါတယ်…. ပြီးတော့ ဆရာတော်တွေရှေ့ မှာခြေဆင်းထိုင်ပီး ပါးစပ်မှလည်း သွားရေတမျှားမျှားနဲ့ကြောက်စရာ အလွန် ကောင်းတယ် လို့ မြင်တွေ့ ရတဲ့ လူတွေကပြောပြပါတယ်။
ဆရာတော်ကဦးချခိုင်းတော့ ဦးချလို့ သူမရပါဘူး။ အမျှဝေတော့ လည်းသူသာဓုမခေါ်နိုင်ပါဘူး မကြားရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာတော်က ဒကာကြီး ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းကထွက်သွာဖို့မိန့်ကြားတော့ သူကရိုးရိုးဖုတ်မဟုတ်ဘူး။ ဖုတ်ဘုရင်လို့ ပြောပါတယ်။
အိမ်ခေါင်မိုးဖွင့် ပေးမှထွက်လို့ ရမယ်ပြောတော့ ချက်ချင်းဘဲ တရားနာနေတဲ့ထဲက လူတစ်ယောက်က လှေကား နဲ့ တက်ပြီး အိမ်ခေါင်သွပ်တစ်ချက်ကို လှန်လိုက်တော့ အဲဒီဖုတ်လည်း သက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီး လဲကျသွား ပါတယ်။ အန်တီလည်း ဆရာဝန်ခေါ်ပြီး သူအဖေ့ရဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်။
ဥပဒေအရ သေစာရင်းရေးရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်စစ်ဆေးချိန်မှာ ရုပ်အလောင်းဟာ သေသေပြီးခါစ နှင့် မတူဘဲ အပုတ်နံ့ ဟာ မခံနိုင်အောင်နံလာပါတယ်။ ချက်ချင်းရေခဲတိုက်ကိုအကြောင်းကြားပြီး လာသယ် သွားစေပြီးနောက်နေ့ မှာသဂြိုလ်ဖို့ စီစဉ်ပါတယ်…နယ်မှာရှိတဲ့ အမျိုးတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားပါတယ်….
နောက်တနေ့ သဂြိုဟ်ဖို့ အလောင်းကို ရေခဲတိုက်ထဲက ထုတ်လာချိန်မှာ အန်တီဟာ သူ့ အဖေမှ ဟုတ်ရဲ့လား လို့ တောင် အမြင်မှားသွားပါတယ်။ အလောင်းက မနေ့ ကနဲ့ မတူဘဲ အရိုးပေါ်အရေတင်ပိန်ပီးနေပါတယ်….
သေသေချင်းမနေ့ ကရုပ်နဲ့ အရမ်းကွာနေပါတယ်။ မီးသဂြိုလ်ပီးတဲ့ နောက် အိမ်ပြန်လာပြီး အဖိုးကြီးအခန်းကို သန့် ရှင်းရေးလုပ်တော့ ကြက်မွှေးတွေရယ်၊ ပျောက်သွားတဲ့ ကြောင်ကြီးရဲ့အမွှေးတွေရယ်ကို တွေ့ ရပါတယ်…. အကယ်၍သာ ဖုတ်ကိုဒီအတိုင်းထားခဲ့ ရင် အချိန်ကြာလာခဲ့ သည်နှင့် အမျှ အန်တီတို့ မိသားစုဘဝဟာ ကြောက်စရာကြီးပါ… ဒီအကြောင်းလေးဟာ ကျွန်တော်အသိရဲ့ အဖြစ်အပျက်အမှန်လေးပါ။
ကြှနျတျောအခုပွောပွမှာကတော့ဖုတျဝငျတဲ့အကွောငျးပါ။ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှအေနျတီတဈယောကျ၏ ဖခငျရဲ့ကိုယျခန်ဓာအတှငျးဝငျရောကျသှားတဲ့ ဖုတျအကွောငျးပါ။ ကြှနျတျောမိတျဆှအေနျတီက မိသားစု သုံးယောကျရှိပါတယျ ….သူ့ယောကျြားရယျ၊ သူရယျ ငါးတနျးအရှယျသား တဈယောကျနဲ့ အတူနထေိုငျ ကွပါတယျ…
အနျတီ့အမြိုးသားကတော့ မလေးရှားနိုငျငံမှာအလုပျသှားလုပျနပေါတယျ… အဲဒီလိုနဲ့ နယျမှာ နတေဲ့အနျတီ့ဖခငျကွီး သူ့သားမကျဖွဈသူ နိုငျငံခွားသှားနတေုနျး သမီးဖွဈသူမိသားစုကိုလညျး စောငျ့ရှောကျ ရငျး မိမိမှာခံစားနရေတဲ့သှေးတိုး၊ဆီးခြိုရောဂါကို ရနျကုနျမှာရှိတဲ့ဆရာဝနျ(အထူးကု)မြားနဲ့ပွသဖို့အတှကျ တဈခကျြခုတျနှဈခကျြပွတျအစီစဉျနဲ့သမီးရှိရာရနျကုနျမွို့တျောကွီးဆီကို တကျလာခဲ့ပါတယျ။
ရနျကုနျကိုရောကျတော့ခဈြစရာကောငျးတဲ့မွေးလေးနဲ့အတူ ရှတေိဂုံဘုရားကွီးကိုလညျးဖူး၊ မွေးလေး သှားခငျြတဲ့ အားကစားကှငျးတှလေညျးလိုကျပို့နဲ့အရမျးကိုပြျောနတောပေါ့ဗြာ။ ဆေးခနျးကိုလညျး သှားပွီး ဆေးစဈကွတယျ။ဆေးစဈခကျြအဖွကေတော့ ဆီးခြိုကသိပျမတကျ ပမေဲ့သှေးကတော့ တျောတျောတကျနေ တဲ့အတှကျ ဆရာဝနျကသှေးကဆြေးတှပေေးလိုကျပွီး သှေးတကျစနေိုငျမယျ့ အစားတှေ ရှောငျဖို့ သတိပေး လိုကျ တယျ။ ဒီလိုနဲ့အနျတီ့အဖဟော သမီးနဲ့ မွေးနှဈယောကျထဲကို စိတျမခတြာနဲ့ သားမကျပွနျလာတဲ့ အခြိနျ အထိ ရနျကုနျမှာခဏနမေယျလို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ….
တဈရကျတော့ ညနေ ညီအကိုမသိတသိအခြိနျမှာ အဲဒီဘကွီးက အိမျရှမှေ့ာထိုငျခုံနဲ့ထိုငျနရေငျးမွေးလေးက သူ့သူငယျခငျြးနဲ့ကစားနတောကိုကွညျ့နရေငျးရုတျတရကျလဲကသြှား တယျ…. အဲဒါကိုမွငျတဲ့ အိမျထဲက သမီးနဲ့ ကစားနတေဲ့မွေးလေးတို့က အပွေးအလှားရောကျလာပွီးတော့ ဘာဖွဈတာလဲလို့မေးလိုကျတယျ…
အဲဒီအခါဘကွီးကဘာမှမဖွဈဘူး၊ ကိစ်စမရှိဘူးလို့ပွောပွီးအိမျထဲပွနျဝငျသှားရာက… အဲအခြိနျစပွီး အဲဒီဘကွီး ဟာအရမျးပွောငျးလဲသှားတော့တာပဲ….အိပျခနျးထဲကအပွငျကို သိပျမထှကျတော့ဘူး….အိမျသားတှနေဲ့လညျး စကားသိပျမပွောတော့ဘူး… အမွဲတမျးဘုနျးကွီးဆှမျးလောငျးနတေဲ့ဘကွီး၊ မနကျတိုငျးတရားခှဖှေငျ့နတေဲ့ သူဟာ ဆှမျးလညျးမလောငျးတော့သလို တရားခှလေညျး မဖှငျ့တော့ဘူး ။
သမီးဖွဈသူကဘာလို့ဆှမျးမလောငျးတာလဲလို့မေးရငျ နမေကောငျးလို့ခေါငျးမူးလို့အကွောငျးပွတယျ…. သမီးက မနကျတရားခှဖှေငျ့ပွနျရငျလညျး ဒေါသထှကျပွီး နားညီးတယျ အိပျလို့မရဘူးဆိုပွီး သောငျးကွမျးပွနျ ပါရော… သူ့သမီးကလညျး တဈခါမှသူ့အဖအေဲဒီလိုမဖွဈဖူးဘူးဆိုပွီး အရမျးအံ့သွနတေယျ။
ဆေးခနျးပွဖို့ ပွောပွနျရငျလညျး ငါနကေောငျးသှားပွီ၊ ဘာမှမဖွဈဘူးလို့ပဲ ပွနျပွောတယျ…ထမငျးစားခြိနျရောကျရငျလညျး အရငျတုနျးကဆိုရငျ သမီးနဲ့မွေးနဲ့အတူစားနကြေ ဘကွီးက အခုအခနျးထဲမှာ တဈယောကျတညျး စားတယျ။ နလေ့ညျစာ သိပျမစားဘူး….
ဟငျးသီးဟငျးရှကျခကျြရငျ ခံတှငျးပကျြနတေယျဆိုပွီး လုံးဝမစားဘူး…. အသားငါး ဆိုရငျတော့ အမြားကွီးစားတယျတဲ့…..့အရငျက အသားငါးသိပျမစားတဲ့သူဆိုတော့သူ့သမီးကလညျး အရမျး ထူးဆနျးနတေယျ။
အဖဘောစားခငျြလဲလို့သမီးကဈေးသှားခါနီးမေးရငျ အမဲသားကြှေးပါလို ပွောတယျ…အဖအေမဲသား မစားဘူး မဟုတျလားလို့မေးရငျ အဲဒါအရငျက…အခုကနျြမာရေးမကောငျးလို့အားရှိအောငျစားပီလို့ပွောတယျတဲ့…
ဘာလဲ နငျကငါ့ကိုမသထာလို့လားလို့မကျြထောကျနီကွီးနဲ့ပွနျမေးသေးသတဲ့…. သူ့သမီးကလညျး အဖစေိတျခမျြးသာအောငျ ခကျြကြှေးပါတယျ။ အမဲသားတို့၊ ကွကျသားတို့ ခကျြကြှေးတဲ့နဆေို့ရငျ ပွုံးရှငျနေ တာပဲ…. အသီးအရှကျခကျြတဲ့နဆေို့ရငျတော့ ရနျလုပျတယျတဲ့ဗြ…. အဲဒီလိုနဲ့ တဈလခှဲလောကျကွာ လာတယျ လေ။
ထူးခွားတာကအနှိပျသညျကို သုံးရကျတခါနှဈရကျတခါလောကျချေါခိုငျးတတျတာပဲ…. သူ့မွေးလကေိုရော၊ တခွား သူ့ကို လူမမာလာမေးတဲ့လူတှကေိုလညျး နှိပျခိုငျးတယျ…. နောကျပွီးတော့ နောကျနမေ့နကျ ဆှမျးလောငျးဖို့အသားဟငျးတှခေကျြထားရငျ ပြောကျပြောကျသှားတယျ….
မီးဖိုထဲမှာ ထားတဲ့ငါးရံ့ခွောကျ တှေ နဲ့ဆတျသားခွောကျတှလေညျး ပြောကျကုနျတယျတဲ့…. ပထမတော့ကွောငျစားတယျနလေိမျ့မယျလို့ စှပျစှဲတယျတဲ့။ နောကျတော့အနျတီလညျး သိပျသင်ျကာမကငျးဖွဈလာတယျ… ဖုတျဝငျနတေဲ့ဘကွီးရဲ့ အနအေထားက တဖွညျးဖွညျးပိုဆိုးလာတယျ။
ဘယျလောကျထိဆိုးလာလဲဆိုရငျ အနျတီတို့အိမျကပေ၂၀၊ ပေ၆၀ အိမျဆိုတော့ ဘေးအိမျနဲ့က အရမျးနီး တယျလေ…ခွံစညျးရိုးလညျးခတျမထားတော့ပုဏ်ဏရိတျပနျးပငျလေးတှနေဲ့ ခွံစညျးရိုးပုံလုပျ ထားတာဆိုတော့ အလှယျတကူ တဈအိမျနဲ့တဈအိမျကူးလိုရတယျ။ ခေါငျးရငျးဘကျအိမျမှာက ကွကျလေးငါးကောငျ မှေးထား တယျ။ အဲဒီအိမျရဲ့ကွကျအိပျတနျးက အနျတီတို့အိမျအနောကျဖေးဘကျကနေ ကပျလကျြရှိနတေယျ။
ဘကွီး အမူအယာတှပေကျြလာပွီးလို့ တလကြျောကွာတဲ့အခါ ကွကျတှကေပြောကျပြောကျသှားတယျ… အဲဒီအိမျက လူတှကေတော့ကွောငျသုတျသှားတယျလို့ထငျတာပေါ့။ အနျတီတို့အိမျမှာကလညျး မီးကောကျဆိုတဲ့ ကွောငျထီးကွီးတဈကောငျရှိတယျလေ။ နောကျပီး အနျတီ့သားကလညျး အိမျနောကျဘကျမှာ ငါးတှမှေေးထား သေးတယျလေ…
တဈရကျမှာ အနျတီက သူအဖအေိပျခနျးကိုဝငျရှငျးပေးတော့ကွကျမှေးတှနေဲ့သှေးအခြို့ကိုတှရေ့တယျ။ အဲဒါနဲ့သူ့အဖကေိုပွပီးမေးတော့အဖိုးကွီးကကွောငျခြီလာတာဖွဈမယျလို့ပွောတယျတဲ့… အနျတီလညျး သိပျမသင်ျကာတာနဲ့အရိပျအခွကွေညျ့နလေိုကျတယျ။ တနေ့ ညနဘေကျ အဖိုးကွီးက အိမျနောကျဖေးဘကျကို သှားရငျး ငါးကနျထဲကို လကျနှိုကျနပွေီး ရှငေါးတဈတောငျကိုဖမျးပွီးတော့ ပါးစပျထဲအထညျ့မှာ သူ့မွေးကမွငျ တော့အနျတီကိုလှမျးချေါပွတယျ။ အနျတီကလညျး အဖဘောလုပျတာလဲလို့မေးရော….
အဖိုးကွီးက ငါးလေးတှေ လှလို့ကွညျ့နတောလို့ပွနျဖွသေတဲ့။ ခုနက ငါးတဈကောငျပါးစပျ ထဲကို ထညျ့လိုကျတယျ မဟုတျလားလို့မေးတော့မသိသလိုနဲ့နပွေီး ငါခေါငျးမူးလာလို့အခနျးထဲပွနျပို့ဆိုပွီးထိုငျခလြိုကျတယျ။ အဲဒါနဲ့အနျတီလညျးသူ့အဖကေို အိပျခနျးထဲတှဲချေါပွီးပွနျပို့ပေးလိုကျတယျ။ အနျတီလညျး ဘာမှမလုပျတတျ တာနဲ့ရပျကှကျထဲကလူတှနေဲ့တိုငျပငျကွညျ့တယျ။ မိတျဆှတှေကေတော့တဈယောကျတမြိုးပွောကွတာပေ့ါ။
ဖုတျဝငျတာထငျတယျလို့အမြားဆုံးပွောကွတယျ။ အနျတီကတော့သူ့အဖကေိုအဲဒီလိုမထငျရကျဘူးလေ၊ အဲဒါနဲ့မလေးမှာရှိတဲ့ယောင်ျကြားဆီဖုနျးချေါပွီးပွောတော့ သူ့ယောင်ျကြားက အဲဒါတှအေယုံအကွညျမရှိတော့ အဖိုးကွီးတဈရကျ အိမျရှမှေ့ာလဲကတြုနျးက ဦးခေါငျးကိုထိခိုကျသှားပီး ဦးဏှောကျထိသှားတယျ ထငျတယျ။
ဆရာဝနျပွကွညျ့ လို့ပွောတယျတဲ့ဗြ။ ဆေးခနျးသှားဖို့ချေါတဲ့အခါကပြွနျတော့လညျး အဖိုးကွီးက မလိုကျခငျြ ဘူးလို့ငွငျးတယျလေ။ ရပျကှကျထဲက ဆရာဝနျကို အိမျပငျ့ပီးပွရော…ဆရာဝနျသှေးခြိနျကွညျ့ တော့ ပွဒါးက တကျမလာဘူးတဲ့ ။ ဘယျတကျမလဲ။ အဖိုးကွီးက အသကျမှ မရှိတော့တာ။ သှေးစမျးတော့လညျး ဘယျလိုမှ သှေးခုနျနှုနျးစမျးလို့မရဘူး ။ ဆရာဝနျလညျးနညျးနညျးလနျ့သှားတယျ။
ဆရာဝနျကအဖိုးကွီးကို ဦးလေး နကေောငျးရဲ့လားတော့မေးတော့အဖိုးကွီးက အသံခပျမာမာနဲ့ မကောငျးဘူး လို့ပွနျဖွတေယျ။ ဘယျနရောက ဘာဖွဈလဲလို့မေးတော့ငါဆာတယျလို့ပွောတယျ။ ဘာစားခငျြလဲလို့ မေးတော့ရငျခေါငျးသံကွီး နဲ့အသားလို့ပွောပီး ဆရာဝနျနဲ့အနျတီတို့ရဲ့တခွားတဈဖကျကိုလှညျ့သှားရော။
ဆရာဝနျလညျး အခနျးအပွငျလညျး ရောကျရော အနျတီ့ကို အဖိုးကွီးကို သူကုလို့မရဘူး။ ပြောကျမှာ မဟုတျ ဘူးလို့ … အရိပျအမွှကျပဲ ပွောပွီးပွနျသှားတယျ။ အနျတီလညျး နယျမှာရှိတဲ့သူ့မောငျနှမတှဆေီကို အကွောငျး ကွားလိုကျတယျ။ လူပြိုဖွဈတဲ့မောငျအငယျဆုံးက ခကျြခငျြးရောကျလာတယျ။
ဒါပမေယျ့အဖိုးကွီးကသူ့သားကိုမသိဘူးဖွဈနတေယျ။ တှတှေ့ခေ့ငျြး မငျးဘယျသူလဲ လို့မေးတယျ။ အနျတီ လညျး အဖသေ့ားအငယျ(မောငျ——-)လလေို့ပွောတော့အဖိုးကွီးက အသကျကွီးတော့ မတေ့တျတယျလို့ ပွနျဖွေ သတဲ့။ နယျက အမြိုးတှစေီစဉျပေး လိုကျတဲ့ခုံဖိနပျတို့ သွဇာရှကျတို့ သိမျဝငျအပျတို့ကို အဖိုးကွီး အိပျယာအောကျကိုထညျ့ဖို့မောငျနှမနှဈယောကျတိုးတိုးတိုငျပငျသတဲ့။
အဲဒါကိုအဖိုးကွီးက အခနျးထဲက ဘယျလိုမှ မကွားနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့အခနျးထဲကအသံသွကွီးနဲ့အဖိုးကွီးက မငျးတို့ဖိနပျစုတျ၊ အပျစုတျကို ငါကွောကျတယျလို့ထငျနလေား…။ အားလုံးအသဆေိုးနဲ့သသှေားမယျ။ ငါ့ကိုဘာမှတျနလေဲလို့ အျောတယျ တဲ့ဗြ။ အနျတီလညျး အရမျးလနျ့သှားပီး အဲဒီအိမျမှာ မအိပျရဲတာနဲ့မကျြစောငျးထိုးက မိတျဆှအေိမျမှာ မောငျနှမတှသှေားအိပျကွရတယျ…
အဲဒီညကစပီး အဖိုးကွီးလဲသောငျးကွမျးတော့တာဘဲ….၊တောကျခေါကျသံတှေ အကယျြကွီးကွားရတယျလို့ ဘေးအိမျကပွောတယျ။ တဒုနျးဒုနျးနဲ့ဖနောငျ့တှလေညျး ဆောငျ့တယျတဲ့…. ဘေးအိမျနဲ့က အရမျးကပျ နတေော့ အားလုံးကွားနရေတယျဗြ…
နောကျတနေ့ အနျတီ့မိတျဆှအေကူညီနဲ့ ဖုတျထုတျတဲ့ ဆရာ တဈယောကျကို အိမျကိုချေါလာတယျ။ သူတို့ အိမျထဲကိုရောကျရောကျခငျြးမှာ မွငျလိုကျကွရတာက အိမျတှငျးအုနျး ကိုဆှဲဖွုတျထားတယျ။ အိမျမှာမှေးထားတဲ့ ကွောငျကွီးကိုလညျး မတှရေ့ဘူးတဲ့….
အဲဒီအခြိနျမှာ အဖိုးကွီးကသောငျးကွမျးပါလရေော… ဆရာကိုလညျး အရမျးကွိမျးတော့တာပဲ။…. ပွီးတော့အခနျးထဲကထှကျလာပွီး ဆရာ့ကိုလညျပငျး ညှဈမလို့လုပျသတဲ့။ ဆရာလညျး ထှကျပွေးရောဗြာ။
အနျတီတို့မောငျနှမလညျး အိမျပျေါကနေ ဆငျးပွေးရရော… ညကအိပျတဲ့အိမျကိုပွနျပွေးလာကွပွီး အနျတီလညျး ကွောကျလို့ငိုပါလရေောတဲ့….. အဲဒီအခြိနျမှာ အဲဒီအိမျကို ဆှမျးခံကွှနေ တဲ့ဦးပဇငျးလေး ကမွငျပွီး ဒါယကာမကွီး ဘာဖွဈတာလဲလို့မေးတယျ။
အနျတီလညျး ဦးပဇငျးလေးကို အကွောငျးစုံ လြှောကျထားလိုကျတယျ….ဦးဇငျးလေးကလညျး ဒါမြိုးတှဟော ဘုရားရှငျလကျထကျထဲက ရှိကွောငျး၊ ဘုရားရှငျရဲ့တရားတျောတှနေဲ့ကမ်မဝါ ၊နဲ့ပရိတျတျောတှကေို သီလသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှကေ ရှတျဖတျပေးရငျ အစိမျးသရဲ၊ နာနာဘာဝတှထှေကျပွေးရကွောငျးကိုရှငျးပွပါတယျ။
ဆရာတျောက ဒကာမကွီးရဲ ဖခငျဟာ လူ့လောကထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ ဒကာကွီးရဲ့ဝိညာဉျမဲ့နေ တဲ့ ကိုယျခန်ဒာ ကို တဈစုံတခုသော ပုဂ်ဂိုလျကဝငျရောကျမှီခိုနတောမို့ ဆရာတျောတို့ကဘုရားရှငျ၏ ပရိတျတရားတျောတှေ ကမ်မဝါစာတှေ ရှတျဖတျပီး သာသနာစောငျ့နတျနဲ့နတျမငျးကွီးလေးပါးကိုအမိနျ့ပွနျစာတမျးတှေ ရှတျဖတျလြှငျ ဝငျရောကျနတေဲ့ပုဂ်ဂိုလျဟာ ခကျြခငျြးဖယျရှားသှားမှာဖွဈတယျ။
အဲဒီအခါမှာ ဒကာကွီးရဲ့ ဝိညာဉျမဲ့ ခန်ဒာကိုယျ သာကနျြခဲ့မှာဖွဈလို့ဒကာမကွီးအနနေဲ့ ဒီသောကမီးကိုကွံ့ကွံ့ခံနိုငျပါ့မလားလို့မေးပါတယျ။ အနျတီလညျး ကွိုတငျပွငျဆငျပွီးသားပါဘုရားလို့ဖွပေါတယျ။
ဆရာတျောက ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ရှိတဲ့ ပရိတျခညျြတှကေို ပေးလိုကျပွီး အိမျပတျပတျလညျကိုခညျြတားစပေါတယျ။ အိမျအဝငျပေါကျတခုတညျးသာ ခနျြခဲ့စပေါတယျ။ ဒါကလညျး ဆရာတျောတှကွှေလာရငျ အိမျထဲဝငျဖို့နဲ့ဖုတျထှကျသှားဖို့ပါ။
အိမျပွနျရောကျတော့အနျတီ့မောငျနဲ့အတူ ရပျကှကျထဲက ယောကျြားလေးသုံးယောကျလောကျက အိမျပတျ ပတျလညျကိုပရိတျကွိုးတားပါတော့တယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာအဖိုးကွီးလညျး အရမျးသောငျးကွမျးပါတော့တာပါပဲ။ ပထမတော့ခွိမျးခွောကျတယျ။ ပွီးတော့တောကျတှခေေါကျ၊ ဖနောငျ့တှေ စောငျ့ပွီး သခေငျြလို့လား ဘာညာ တှေ ပွောပီး အခနျးထဲမှာရှိတဲ့ပစ်စညျးတှကေိုကောကျပေါကျတာတှေ လုပျသတဲ့ဗြ…..
မရလညျး မရရော ငိုပီး တော့ သူ့သားကို အဖကေို့မသတျပါနဲ့အဖမေသခေငျြသေးဘူးလို့လိမျပွီးဟနျဆောငျပွောသတဲ့။ သူ့သား ကလညျး မသိခငျြဟနျဆောငျပွီးလုပျစရာရှိတာကိုဆကျလုပျတယျ။ ညနသေုံးနာရီလောကျမှာ ဆရာတျောတှေ ကွှလာကွတယျ။
ဆရာတျောတှေ အိမျပျေါလညျးရောကျရော အဆငျသငျ့ပွငျထားတဲ့ပရိတျပနျး၊ ရေ၊ သဲ၊ အပျခညျြ စတာတှကေို အနျတီက သူသှားနတေဲ့အိမျကယူပီး သူ့အိမျကိုကူးလာခဲ့တယျ ။ အဖိုးကွီးကလညျး အိမျခနျးထဲမှာ သောငျးကွမျး နတောဗွောငျးဆနျနတောဘဲတဲ့။ တောကျတှလေညျးခေါကျ ။ သကျပွငျးတှခြေ အသံသွကွီး နဲ့အျောနသေတဲ့။
ဆရာတျောတှကေလညျး အိမျရှငျကို ဒီအိမျမှာ မကောငျးသော နာနာဘာဝတှနေထေိုငျတာကို ကွိုကျမကွိုကျ အရငျမေးပါတယျ။့ပွီးတော့အိမျရှငျမကွိုကျလို့နှငျပေးပါရနျ ဆရာတျောမြားကို လြှောကျတငျ ပါကွောငျး ပွောတဲ့ အခါ ဆရာတျောက အိမျပိုငျရှငျမကွိုကျပါသောကွောငျ့ သာသနာစောငျ့နတျနဲ့ဝိရူပက်ခ၊ ဝိရူယက်ခ၊ ဒသရဌ၊ ကုဝရေ….စတဲ့နတျမငျးကွီးလေးပါး သိကွားမငျး ၊ မွို့စောငျ၊့လမျးစောငျ၊့အိမျစောငျ့နတျ တှကေိုမွတျစှာဘုရား၏ အမိနျ့ပွနျစာတှရှေတျဖတျပီး နာနာဘာဝကိုသငျ့တျောရာသို့ ချေါဆောငျ သှားရနျ ပွောဆိုပီး ကမ်မဝါ၊ရတနာသုတျ၊့အာဋာဏာဋိယသုတျနဲ့ဘုရားဂုဏျတျော၊ တရားဂုဏျတျော၊ သံဃာဂုဏျတျော တှေ ကိုရှတျဖတျပေးပါတယျ။
ဘုရားရှငျရဲ့ပရိတျတရားတျောတှရှေတျဖတျစဉျမှာ အိပျခနျးထဲကအဖိုးကွီးက ပူလောငျလှကွောငျး၊ သူ့ကိုဝိုငျးပီးနှောငျ့ယုကျနကွေကွောငျး နားထဲကို သံရညျပူတှေ လောငျးထညျ့ နကွေ ကွောငျး အျောပွောပါတယျ။
ဆရာတျောလညျး ပရိတျမြား ရှတျဖတျပီး အဖိုးကွီးကိုအပွငျထှကျခဲ့ဖို့ချေါလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အဖိုးကွီးဟာ အိပျခနျးထဲကနပေီး လညျပငျးကွီးကို၉၀ဒီဂရီလောကျစောငျးပီး လေးဖကျထောကျထှကျ လာပါတယျ…. ပွီးတော့ဆရာတျောတှရှေမှေ့ာခွဆေငျးထိုငျပီး ပါးစပျမှလညျး သှားရတေမြှားမြှားနဲ့ ကွောကျစရာ အလှနျ ကောငျးတယျ လို့မွငျတှရေ့တဲ့လူတှကေပွောပွပါတယျ။
ဆရာတျောကဦးခခြိုငျးတော့ဦးခလြို့သူမရပါဘူး။ အမြှဝတေော့လညျးသူသာဓုမချေါနိုငျပါဘူး မကွားရဘူးလို့ပွောပါတယျ။ ပွီးတော့ဆရာတျောက ဒကာကွီး ခန်ဒာကိုယျအတှငျးကထှကျသှာဖို့ မိနျ့ကွားတော့သူကရိုးရိုးဖုတျမဟုတျဘူး။ ဖုတျဘုရငျလို့ပွောပါတယျ။
အိမျခေါငျမိုးဖှငျ့ပေးမှထှကျလို့ရမယျပွောတော့ခကျြခငျြးဘဲ တရားနာနတေဲ့ထဲက လူတဈယောကျက လှကေား နဲ့ တကျပွီး အိမျခေါငျသှပျတဈခကျြကို လှနျလိုကျတော့အဲဒီဖုတျလညျး သကျပွငျးတဈခကျြခပြွီး လဲကသြှား ပါတယျ။ အနျတီလညျး ဆရာဝနျချေါပွီး သူအဖရေဲ့ ကနျြရဈတဲ့ ရုပျအလောငျးကိုစဈဆေးခိုငျးပါတယျ။
ဥပဒအေရ သစောရငျးရေးရနျအတှကျဖွဈပါတယျ။ ဆရာဝနျစဈဆေးခြိနျမှာ ရုပျအလောငျးဟာ သသေပွေီးခါစ နှငျ့မတူဘဲ အပုတျနံ့ဟာ မခံနိုငျအောငျနံလာပါတယျ။ ခကျြခငျြးရခေဲတိုကျကိုအကွောငျးကွားပွီး လာသယျ သှားစပွေီးနောကျနမှေ့ာသဂွိုလျဖို့စီစဉျပါတယျ…နယျမှာရှိတဲ့အမြိုးတှကေိုလညျးအကွောငျးကွားပါတယျ….
နောကျတနသေ့ဂွိုဟျဖို့အလောငျးကို ရခေဲတိုကျထဲက ထုတျလာခြိနျမှာ အနျတီဟာ သူ့အဖမှေ ဟုတျရဲ့လား လို့ တောငျ အမွငျမှားသှားပါတယျ။ အလောငျးက မနကေ့နဲ့မတူဘဲ အရိုးပျေါအရတေငျပိနျပီးနပေါတယျ….
သသေခေငျြးမနကေ့ရုပျနဲ့အရမျးကှာနပေါတယျ။ မီးသဂွိုလျပီးတဲ့နောကျ အိမျပွနျလာပွီး အဖိုးကွီးအခနျးကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျတော့ကွကျမှေးတှရေယျ၊ ပြောကျသှားတဲ့ကွောငျကွီးရဲ့အမှေးတှရေယျကို တှရေ့ပါတယျ…. အကယျ၍သာ ဖုတျကိုဒီအတိုငျးထားခဲ့ရငျ အခြိနျကွာလာခဲ့သညျနှငျ့အမြှ အနျတီတို့ မိသားစုဘဝဟာ ကွောကျစရာကွီးပါ… ဒီအကွောငျးလေးဟာ ကြှနျတျောအသိရဲ့အဖွဈအပကျြအမှနျလေးပါ။
Previous post (၂၀၁၉)ခုနှစ်မှာ ဒုတိယမြောက် Star Award ကိုမင်းသမီးချောလေးမေမြင့်မိုရ် ထပ်မံသိမ်းပိုက်ဦးမလား ပရိတ်သတ်ကြီးရော အမြင်လေးတွေ ရေးခဲ့ပေးနော်
Next post “အကြာကြီးချစ်ခဲ့ အချစ်ကြီးချစ်ခဲ့ပြီးမှ ချစ်ကံခေခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲများ”